Chọpụta ihe nzuzo niile nke igwe na SkySafari maka Mac | Esi m mac
Chọpụta ihe nzuzo niile nke igwe na SkySafari maka Mac
Mgbe anyị lere anya na mbara igwe n'abalị doro anya, anyị enweghị ike ịnwe mmetụta ọzọ karịa nke ahụ. N'ebe ahụ ka anyị na-ahụ obere isi na satịlaịtị anyị na-akpọ Ọnwa, a nnukwu ihe dị egwuSite na kpakpando na mbara ala rue ihe ndi ozo, satellites, nebulae na, n'ezie, ihe di iche iche bu ihe sitere na mmadu, dika ihe eji eme ihe.
con Sky Safari 5 maka Mac i nwere ike mụta ihe niile gbasara elu-igwe na mbara igwema ọ bụ. Nke a bụ mmelite nke ise nke ise dị na mbara igwe, nke kachasị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịmụ ihe karịrị anya ha na mbido, mmekọrịta na ụzọ na-akpali akpali. Ọzọkwa, ugbu a ọ bụrụ na ị mee ọsọ ọsọ ị ga-enwe ike ịnweta ya na ọkara ọnụahịa.
SkySafari 5 maka Mac
Sky Safari 5 bụ ngwa ngwa mbara igwe dị egwu nke ị ga - enwe ike ịmatacha ihe niile zoro ezo na mbara igwe site na ihuenyo nke Mac gị, ma karịa ihe niile, n'ụzọ dị iche na ịnụ ụtọ, yana ọtụtụ ozi yana, n'ozuzu, Ihe ịtụnanya ahụmahụ.
Offọdụ n'ime ihe ngosi nke Sky Safari 5 maka Mac:
ọ Nwere ozi site na ihe karịrị 120.000 kpakpando na ihe kariri 200 kpakpando, nebulae na galaxies, tinyere mbara ala na ọnwa ha, asteroids, comets, satellites na ndị ọzọ.
A na-echekwa ozi niile na ngwa ahụ, ozugbo ebudatara, ị gaghị achọ ịntanetị.
Nwere ike jiri anya nke uche hụ chi jiri n’ehihie nke gara aga na nke di n'ihu.
Na-anwale mmiri ozuzo ihu igwe, na-agafe comet, na ọbụna na-eme ka mbara igwe n'abalị site na ebe ọ bụla n'ụwa ọtụtụ afọ gara aga ma ọ bụ n'ọdịnihu.
Chọgharịa site na ọtụtụ narị nkọwa nke ihe, foto mbara igwe na onyonyo nke ụgbọ elu NASA.
Mara n'ụzọ zuru ezu na International Space Station (ISS).
Anata nkwuputa mgbe ndị ISS na nnukwu Satellites ndị ọzọ gafere n’elu.
Mmekọrịta na Maapụ nke Apple.
Sky Safari 5 Ọ nwere ọnụahịa mbụ nke euro 10,99 n'agbanyeghị ugbu a ị nwere ike nweta ya na ọkara ọnụahịa. Ma cheta na onyinye a bụ maka obere oge na ọ nwere ike ịkwụsị n'oge ọ bụla. Ya mere, ọ bụrụ na i nwere mmasị, ana m enye gị ndụmọdụ ka ị budata ya ozugbo i nwere ike, ka ị nwee ike irite uru na mbelata ego a. Cheta na, ọ bụrụ n'ikpeazụ ọ masịghị gị, ịnwere ike ịrịọ nkwụghachi ma weghachi ego gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Chọpụta ihe nzuzo niile nke igwe na SkySafari maka Mac
Site na ụbọchị 1 ruo ụbọchị 3. Oge mbupu maka AirPods na-ada ọzọ
Yoink maka mac tinyeziri nkwado mkpokọta